भारतीय बजार जान नेपालीलाई परिचयपत्र अनिवार्य – 24updatemedia
भारतीय बजार जान नेपालीलाई परिचयपत्र अनिवार्य
बिरा दत्त भट्ट/न्युज कारखाना/ दार्चुला : भारतीय बजार धार्चुला जान नेपालीले परिचपत्र अनिवार्य देखाउनुपर्ने भएकाे छ । नेपाल-भारत जोड्ने खलंगाको सीमा पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य परिचयपत्र देखाउन सूचनाबोर्ड नै टाँसेकाे छ ।
हरेक दिन मदजुरी र काम विशेषले भारत जानेलाई पनि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सामान किनबेच गर्न भारतीय बजार धार्चुला जाने नेपालीलाई पुलमै लाइन लगाएर एसएसबीले नागरिकता वा परिचयपत्र हेरेर मात्रै भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश दिइरहेका छन् । राहदानी, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सरकारी निकायको परिचयपत्रमध्ये एउटा परिचयपत्र देखाए मात्रै भारत जान दिइँदैछ । पाँच प्रकारका परिचयपत्रमध्ये कुनै एउटा देखाएमा मात्रै भारत प्रवेश गर्न दिइने एसएसबीको सूचना पाटीमा उल्लेख छ ।
भारतले व्यासको छाङरू र तिंकरमा जनगणनामा असहयोग पनि गरेको थियाे । भारतको बाटो भएर हिँडने अनुमति नदिएपछि जनगणना टोलीलाई बिहीबारमात्रै हेलिकप्टरबाट खलंगा ल्याइएको छ ।
अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने कुटी, नाभि र गुञ्जीमा नेपालले जनगणना गर्नसक्ने भन्दै भारतीय सुरक्षा निकाय स’शंकित बनेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेकोले गणक अ’तिक्र’मित क्षेत्रसम्म पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै सीमापुलमा निगरानी बढाएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउने प्रयास भइरहेको पुलघाट प्रहरी चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक मनोज खड्काले बताए । आवतजावत सहजका विषयमा कोतवाली धार्चुलाका इन्चार्जसँग कुराकानी गरिएको उनकाे भनाइ छ । भारतीय एसएसबीले दशैँतिहारमा पनि भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
Previous के धर्तीमा पानी सकिँदैछ ? के मानवीय सङ्कट देखा परे कै हो ?
Next सल्यानमा घट्यो अपत्यारिलो घटना : दुई भाउजु मिलेर आफ्नै देवोरलाई ……
खुसीको खबरः१२ हजार जनाका लागी सरकारी जागिर खुल्यो।इच्छा हुनेले जानकारी लिनुहोला
शाहरुख खानका छोरा आर्यनले यस्तो काम गर्न थालेपछि आमा गौरीले दिइन् शिरमा हात राखेर आर्शिबाद
‘बजाई देउ’पछि समिक्षाले ल्याइन् ‘हाँगाको फुल’को भिडियो